Federasion’ny Basikety Malagasy Hiara-kiasa amin’ny Oniveristen’Antananarivo
Hiaraka hiasa amin’ny Oniversiten’Antananarivo manomboka izao ny FMBB « Federation Malagasy de Basket Ball »
amin’ny fampiroboroboana sy fampakarana ny lentan’ny taranja Basketball eny amin’ity fampianarana ambony Malagasy ity ary koa ho fanamafisana ny fifandraisana ara-piarahamonina hoan’ny tanora Malagasy. Tontosa omaly alakamisy 19 martsa 2020 teny amin’ny tranon’ny “Rectorat” teny Ankatso ny fifanaovan-tsonia amin’ity fifanarahana ity ka nanataneraka an’izany an-daniny ny filohan’ny FMBB Ramaroson Jean Michel ary an-kilany ny filohan’ny Oniversite am-perinasa Ravelomanana Mamy Raoul. Tonga nanotrona ny fotoana kosa ny solontenan’ny ministeran’ny fampiarana ambony sy ny solontenan’ny miniseran’ny tanora sy fanatanjahantena mpiahy ny roa tonta.
Hanamarika hainga vao ho an’ny taranja basikety eny anivon’ny tontolon’ny Oniversiten’Antananarivo indray ity fifanarahana ity ; ny Oniversiten’Antananarivo izay niaingan’ireo mpilalao sangany tamin’ity taranja ity tamin’ny fotoanandrony.